हामी हिँड्दा खर्च हुने ऊर्जाबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ, नेपालका यी वैज्ञानिक त्यसैमा अनुसन्धान गर्दैछन्
सुन्दा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ, हाम्रा हरेक क्रियाकलापमा खेर गइरहेका ऊर्जालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
अनुमान गर्नाेस त, दिनभरमा हामी कति यात्रा गर्छौं ? काठमाडौंका सडकमा मात्र कति सवारीसाधन कुद्छन् ? अनि हामी हिँड्दा वा सडकमा सवारी चल्दैगर्दा दैनिक कति ऊर्जा खेर गइरहेकाे होला ?
हो, यस्तै खेर गइरहेको ऊर्जा सङ्कलन गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विगत दुई वर्षदेखि नेपालभित्रै अनुसन्धान गरिरहेका छन्, डा. खगेन्द्र त्रिपाठी । ‘हामीले दैनिक जीवनमा गरिने क्रियाकलापबाट खेर गइरहेको ऊर्जाबाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैका बारेमा हामी नेपालमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
त्रिपाठी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘जस्ताे कि ट्रेडमिलमा ट्राइबो इलेक्ट्रिक नानो जेनेरेटर जडान गरियो भने त्यसमा मानिस दौडँदा खेर गइरहेको ऊर्जालाई उक्त डिभाइसमार्फत उत्पन्न गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार धेरै देशमा यो प्रविधिको विकास भइसकेकाे छ । यस्तो उपकरण हामीले आफ्नो शरीरमा पनि राख्न सक्छौँ । त्यसपछि हामी हिँडिरहँदा वा केही गरिरहँदा खेर गएको ऊर्जा उक्त उपकरणमा उत्पन्न भइरहन्छ ।’
त्रिपाठीका अनुसार सडकमा कालोपत्रेको सट्टा निकै पातलो र बलियो ‘ग्राफिन’ पदार्थ बिछ्याइयाे भने सवारीसाधन आवतजावत हुँदा खेर जाने ऊर्जा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । ९ वर्ग सेन्टिमिटर बराबरको क्षेत्रफलबाट यो प्रविधि प्रयोग गरेर कम्तिमा एक मिलिभोल्ट विद्युत् निकाल्न सकिने उनकाे भनाइ छ । त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
कोरियाबाट फर्किएका त्रिपाठी दुई वर्षदेखि नेपालमै बसेर मटेरिअल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
यो क्षेत्रमा काम गर्दा हतोत्साही गर्नेदेखि हौसला दिनेसम्म भेटिएको अनुभव छ । केही प्रतिष्ठित व्यक्तिले समेत आफूलाई पुनः विदेश जान सुझाव दिएको उनले बताए । तर, उनलाई विदेशी सुखसयलभन्दा नेपालभित्रकै सङ्घर्ष प्यारो लाग्यो ।
नेपालमा चुनौती मात्र होइन, प्रशस्त अवसर र सम्भावना पनि देखेका छन् त्रिपाठीले । भन्छन्, ’तर, केही समस्या यहाँको संरचनामा छ ।’ हरेक क्षेत्रलाई विज्ञ तथा दक्ष व्यक्तिभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रजस्ताे बनाइएकोप्रति उनको गुनासो छ ।
आफूले अहिलेसम्म कतैबाट सहयोग नपाएको उनी बताउँछन् । ‘सबैले सकारात्मक कुराचाहिँ गर्नुहुन्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘तर न राज्यस्तरबाट कुनै पहल हुन सकेको छ, न कसैले चासो देखाएका छन् ।’
त्रिपाठीका अनुसार ग्राफिनबारे अध्ययनका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन धेरैतिर पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि विशेषतः नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सँग कुरा भइरहे पनि सकारात्मक लक्षण नदेखिएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।
लागतकै हिसाब गर्ने हो भने, सुरुको चरणमा ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी मात्र जेनेरेट गर्न भने खासै धेरै खर्च नलाग्ने त्रिपाठी बताउँछन् । ‘सुरुमा त हामीले थोरै लागतमा कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर देखाउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर विभिन्न थरी उपकरण ल्याएर अनुसन्धान गर्न भने धेरै खर्च लाग्छ । जुन व्यक्तिगत तबरबाट गर्न सहज छैन ।’
कसैले सहयोग गरे खेर गइरहेको ‘मेकानिकल इनर्जी’ उत्पादन गर्ने र ‘मटेरिअल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ’लाई नेपालमा कसरी उपयोगी बनाउने भनेर आफू काम गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेपालमा मटेरिअल साइन्ससम्बन्धी एउटा गतिलो ल्याबसमेत नभएको भन्दै त्रिपाठी दुखेसाे गर्छन्, 'नास्टमा मटेरिअल साइन्स एन्ड नानो टेक्नोलोजी भन्ने एउटा शाखा त छ, तर सीमित साधन स्रोतका कारण प्रभावकारी काम गर्न सकिराखेको छैन । पहिला त राज्यले अनुसन्धान गर्ने राम्रो संस्था स्थापना गर्नुपर्नेमा नै जोड दिन्छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर ऊर्जा कुनै दिन सकिने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर पृथ्वीको तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका चुनौतीहरू छन् । त्यसैले सफा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने टड्काराे विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । यो क्षेत्रमा नेपालभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससाथ सक्रिय छन् त्रिपाठी ।
वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत पत्ता लगाउन नसके कुनै बेला रित्तिने ऊर्जाको प्राकृतिक स्रोतपछिकाे चुनाैतीकाे सजिलै सामना गर्न सकिने उनकाे तर्क छ । त्यसैले धेरै देशले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् । त्यसमध्यकै एक उपकरण हो, ‘ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर’ । यो उपकरणको विकास सन् २०१२ मा भएको हो ।
को हुन् त्रीपाठी ?
उनी काभ्रेपलाञ्चाेक जिल्लाका हुन् । काभ्रेकै जनचेतना माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनी सन् १९९७ मा आईएस्सी पढ्न काठमाडौं आए। त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजबाट भौतिक विज्ञानमा स्नातक गरे । सन् २००५ मा त्रिविबाट स्नाकोत्तर गरेका उनले २०१२ सम्म नेपालकै विभिन्न क्याम्पसमा पढाएका थिए । सोही वर्ष विद्यावारिधिका लागि दक्षिण कोरिया गएका त्रिपाठीले त्यहाँको सनमुन युनिभर्सिटीअन्तर्गतको ‘मटेरिअल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट’मा रहेर पीएचडी पूरा गरे । हाल उनी सेन्ट जेभियर कलेजमा अध्यापन गराउँछन् । र, त्यहीँ रहेर आफ्नो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
नेपालमै बसेर वैकल्पिक ऊर्जास्रोत विकासको लागि विभिन्न उपकरण बनाउन अनुसन्धान गरिरहेका त्रिपाठी सन् २०१९ मा फर्किएका हुन् । कोरियामा रहँदा विभिन्न अनुसन्धानमा सफलता हात पारिसकेको बताउने उनी मटेरिअल साइन्सको क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर स्वदेश फर्किएकाे बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २१, २०७७, १०:१७:००